သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကို အဆင်ပြေစေရန်ဖြည့်စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကိုတစ်ဘဝလုံးနဲ့တင်စားပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း – Shwe Yaung News
သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကို အဆင်ပြေစေရန်ဖြည့်စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကိုတစ်ဘဝလုံးနဲ့တင်စားပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဇနီးလေးဇင်သဲနိုင်ကတော့ သားသမီး ၃ ယောက်နဲ့အတူ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို လူတိုင်းအားကျရအေင် ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်.
ပိုင်ဇေရဲထွန်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲအဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲ ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဇနီးဇင်သဲနိုင်ကတော့ ကလေး ၃ ယောက်အမေလို့ထင်ရက်စရာမရှိအောင် လှရက်နိုင်သူလေးပဲ
ဖြစ်ပါတယ်. သူမကတော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ရတနာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း အောင်မြင်အောင်လုပ်ကိုင်နေပြီးအစားအသောက်လုပ်ငန်း
ကနေ ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေနဲ့ မကြာခင်ကာလမှာတုန်းကဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားတဲ့သူများစွာရှိနေတာကြောင့်
ကွယ်လွန်သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေရတဲ့ ရေဝေးမှာ အသုဘချမီးသဂြိုလ်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပရဟိတသမားတွေအတွက် စားစရာတွေကိုလည်း လှူပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း ဖခင်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးမှာ ” သားအတွက် ထာဝရ. အမိုး ထာဝရအရိပ်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ Happy Birthday. ဖေဖေ ” လို့ ရေးသားပြီး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးထားတာ
သူ့ပို့စ်အောက်တွင်လည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ သူငယ်ချင်းများမှလည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစာလေးတွေ ရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်…
Source: Paing Zay Ye Tun
သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲေတြကို အဆင္ေျပေစရန္ျဖည့္စည္းေပးခဲ့တဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူကိုတစ္ဘဝလုံးနဲ႔တင္စားၿပီး ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္း
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာ ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ႕ ဇနီးေလးဇင္သဲႏိုင္ကေတာ့ သားသမီး ၃ ေယာက္နဲ႔အတူ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို လူတိုင္းအားက်ရေအင္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္ပါတယ္.
ပိုင္ေဇရဲထြန္းကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပမဲ့ပရိသတ္ေတြနဲ႔အၿမဲအဆက္အသြယ္မျပတ္ဘဲ ရွိေနသူျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ႕ ဇနီးဇင္သဲႏိုင္ကေတာ့ ကေလး ၃ ေယာက္အေမလို႔ထင္ရက္စရာမရွိေအာင္ လွရက္ႏိုင္သူေလးပဲ
ျဖစ္ပါတယ္. သူမကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ရတနာလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီးအစားအေသာက္လုပ္ငန္း
ကေန ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြနဲ႔ မၾကာခင္ကာလမွာတုန္းကဆုံးပါးကြယ္လြန္သြားတဲ့သူမ်ားစြာရွိေနတာေၾကာင့္
ကြယ္လြန္သူေတြရဲ႕ေနာက္ဆုံးခရီးကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနရတဲ့ ေရေဝးမွာ အသုဘခ်မီးသၿဂိဳလ္ဖို႔ကူညီေပးေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ပရဟိတသမားေတြအတြက္ စားစရာေတြကိုလည္း လႉေပးခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီေန႔ကေတာ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္း ဖခင္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းေလးမွာ ” သားအတြက္ ထာဝရ. အမိုး ထာဝရအရိပ္ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ Happy Birthday. ေဖေဖ ” လို႔ ေရးသားၿပီး ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးထားတာ
သူ႔ပို႔စ္ေအာက္တြင္လည္း ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွလည္း ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးထားပါေသးတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ႕ ဖခင္အတြက္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစာေလးေတြ ေရးသားေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္…
သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူရှိချင်နေကြောင်းပြောပြလာတဲ့ လူမင်းရဲ့သမီးလေး ဧရာဝတီလူမင်း
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖြစ်တဲ့ PDFတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် ငွေကြေးနဲ့ အစားအသောက်တွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ Ma Sao Lay..